I-35 YEENWELE ZENTSIMBI EZIBALASELEYO ZAMADODA ANEZIHLOKO EZIPHAMBILI (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 yeenwele zeNtsimbi eziBalaseleyo zaMadoda aneZintloko eziPhambili
Amadoda anebunzi elikhulu ahlala efuna ukufumana iindlela zokufihla okanye zokugquma amabunzi abo. Kwaye ngelixa abafana kufuneka bahlale bethathela ingqalelo ubuso nobuso babo ngaphambi kokukhetha ukusika…
Amadoda anebunzi elikhulu ahlala efuna ukufumana iindlela zokufihla okanye zokugquma amabunzi abo. Kwaye ngelixa abafana behlala beqwalasele ubuso babo kunye nobume bentloko ngaphambi kokukhetha ukusika kunye nezitayile, zininzi iindlela zokunciphisa ibunzi eliphakamileyo, elide, elibanzi okanye elikhulu. Njengencopho yomhlolokazi okanye iinwele ezibuyayo , iinwele ezifanelekileyo zamadoda amakhulu ebunzi zingenza umahluko. Ngapha koko, iinwele eziphezulu zamadoda ezibunzi eziphakamileyo zibukeka zihamba kakuhle kwaye zide zibe nemilinganiselo yakho. Nazi iinwele ezilungileyo zamadoda anebunzi elikhulu.
1Ukucheba iinwele zamabunzi amakhulu
1.4Icala elitshayelwe ngaphantsi
1.6Ukucoca iNtloko yeMpandla
1.9Mde kwaye yaLayishiwe
1.10I-Choppy Crop ephezulu iphela
1.12Mfutshane kunye noMessy
Ukucheba iinwele zamabunzi amakhulu
Ukucheba iinwele kumabunzi amakhulu kuza ngobude bonke, ukusika kunye nezitayile. Kubaqalayo, zonke ezona zininzi iinwele ezithandwayo kubafana namhlanje beza ne ukubuna okanye ngaphantsi emacaleni nasemva. Emva koko, iinwele ezilungileyo zebunzi eliphakamileyo zinokuvela kwintloko enenkqayi, ukusikwa kwe-buzz kunye nomphetho kwi icala icala , ikama ngaphezulu , ndibuyele emva , kunye vutheleka .
Abachebi abanobuchule banobuchule ekuthatheni ingqalelo uhlobo lweenwele zakho. Ukucheba iinwele zamadoda ane ikheli , wavy kunye neenwele ezincinci zingadinga ubuchule obukhethekileyo bokusika kunye nesitayile, kubandakanya ukusetyenziswa kwe Pomade enexabiso eliphezulu . Ukwenza ibunzi lakho libonakale lincinci, makhe sihlolisise iinwele eziphezulu kubafana abaneentloko ezinkulu!
Ukunqunyulwa kukaKesare kukhulu iinwele zolondolozo ezisezantsi Ezinokuthambisa nayiphi na imilo yentloko. Ebizwa ngegama likaJulius Caesar, oku kunqunyulwa kweenwele kufutshane kuhlala kubhangqiwe ukuphela kwetaper emacaleni kunye nomphetho omfutshane ngaphambili. UKesare ke wenza isitayile ngokuxubha iinwele ngaphezulu ukuya phambili ukufihla kunye nokunciphisa ibunzi.
Oku kunqunyulwa okuqhelekileyo kusebenza kakuhle kunye neenwele ezinciphayo kunye nazo zonke iintlobo zeenwele, kubandakanya neenwele ezincinci. Sebenzisa nje i matte pomade ukugqitywa okubhaliweyo okuya kwenza ukuba iinwele zakho zibukeke ngokwendalo.
Inkqubo ye- ukusikwa kwe-buzz yenye yezona zinwele zifutshane zibalaseleyo emadodeni. Ngokukodwa, i-buzz cut fade yimbonakalo yobudoda ekulula ukuyifumana kwaye ingenzame kwisitayile. Icebo lokulungisa iinwele kukunciphisa umahluko phakathi kweenwele kumacala nangaphezulu ngokudibanisa iinwele.
Ukufumana i-buzz cut, buza umchebi wakho ye phezulu ulusu luyaphela emacaleni nasemva nge- # 1, # 2, okanye # 3 isikwe ngaphezulu. Inombolo yokucheba oyicelayo ixhomekeke kwindlela ofuna ukuba iinwele zibe mfutshane ngayo.
Yala maxesha kwaye ilula, ukusikwa kwe-buzz kujongeka kupholile kwaye kuthambile ukuba unobuso obufanelekileyo bayo.
Inkqubo ye- Isityalo saseFrance iye yezona ndawo zishushu zezinwele zamadoda kule minyaka idlulileyo. Ukucheba iinwele okuphezulu kubonakaliswa ziinwele ezimfutshane ezinamathe emacaleni nasemva ngee-bangs ezixhonywe ebunzi. Umphambili onqamlezileyo unokunqunyulwa ungangxami, uthe tye, mfutshane okanye mde.
Ngokushiya umphetho omde, unokhetho lokuzi brusha iinwele phambili kwaye uziyeke ziwele phezu kwebunzi lakho okanye uzitshayele ecaleni. Inesibindi kwaye inemfashini, isityalo saseFrance esiphelayo sijongeka sigqibelele ngendalo, ukugqitywa okubhaliweyo ngaphezulu.
Icala elitshayelwe ngaphantsi
Icala elitshayelwe ngaphantsi kweenwele zezitayile ezongeza ubuhle obukhethekileyo. Kunye iinwele ezingaphantsi emacaleni nasemva, uzakufuna iinwele ezimfutshane ukuya kweziphakathi phezulu. Ngokukodwa, qiniseka ukushiya umphetho ixesha elide.
Ukwenza isitayile secala elitshayelwe ngaphantsi kwe-bangs, sebenzisa iimveliso zokwenza isitayile ngomatshini wendalo, obhaliweyo. Shayela ngaphambili ukuya kwelinye icala ukufezekisa i-angular fringe efanelekileyo kwibunzi elikhulu. Amalungu alinganayo apholileyo kwaye aqhelekileyo, oku kujongeka kutsha kunokufakwa isitayile kumdaka , ikhululekile, okanye icocekile ukugqibezela kakhulu.
Inkqubo ye- abasebenzi abasikiweyo yenye yezona zinwele zakudala zamadoda. Kancinci kancinci kune ukusikwa kwe-buzz , iinwele ezisikiweyo zeqela labasebenzi zihlala zidityaniswa neenwele zetaper emacaleni. Ukuphelelwa lixesha kunye nobudoda, le ndlela icocekileyo ilungele uninzi lwabantu kwaye iimilo zentloko .
Ngamacala anama-buzz kunye nobude obufutshane ngaphezulu, uya kuba nakho ukuguqula iinwele zakho nangayiphi na indlela oziva uthomalalisa abafana abanamabunzi amakhulu. Amanye amadoda akhetha ukuhambisa iinwele phantsi kunye nespiki okanye tshayela umphambili ukugcina izinto zilula Ngelixa abanye basebenzisa iimveliso zeenwele ukongeza ubumdaka.
Ukucoca iNtloko yeMpandla
Intloko ye-bald inokuba sisitayile esihle sebunzi eliphakamileyo kuba iyayicheba ngokupheleleyo inwele. Ngaphandle kwentloko yokukuxelela apho ibunzi liqala kwaye liphela khona, intloko echetyiweyo isikiwe ethambileyo, egudileyo kodwa egudileyo.
Ukubonakala kwendoda eyongezelelweyo, khulisa kwaye ulungise iindevu. Intloko ye-bald enentshebe epheleleyo ikwayindlela entle enamadoda ibhali okanye uchebe iinwele. Elona candelo lilungileyo unokusebenzisa iziqhobosheli zeenwele kwaye uchebe intloko ekhaya ngokulula.
Umphetho omde unokuba sisitayile esihle kubafana abaneentloko ezinkulu okanye a iinwele ezibuyayo . Imfutshane okanye inde, iinwele ezinemiphetho ziyafihla kwaye libunzi lakho libonakale lincinci. Qala nge taper okanye fiphela ngaphantsi emacaleni, kwaye ushiye iinwele ngaphezulu nangaphambili zide zibekeke.
Uluhlu lubonelela ngomlinganiso omtsha ophucula umthamo kunye nokuhamba. Ukwenza isitayile, vumela ii-bangs zakho ziwele phezu kwebunzi lakho. Choppy, emboxo okanye ethe tye, gcina ukukhanya kwesitayile ngekhrim okanye imousse eyonyusa intshukumo.
Ifashoni kunye nobuhle obuhle, iinwele zamadoda ezisemngceleni zisebenza kuzo zonke iintlobo zeenwele, ubude kunye nezitayile. Nokuba uneenwele ezingqindilili, ezibhityileyo, ezithe nkqo, ezi-wavy okanye ezigobileyo, ii-bangs zingadlala kakuhle ngenkangeleko yakho.
Ukucheba iinwele emkhosini kunokuhambelana namadoda anobume obahlukeneyo bobuso, ubungakanani bebunzi, uburhabaxa beenwele, ubude, kunye nezitayile. Olunye usiko lomkhosi oluthandwayo yile ukuphela okuphezulu nokuqinileyo . Izinto eziguqukayo kodwa ezithandekayo, le nweleyi iza naphakathi okanye okuphezulu kwe-bald fade ukunciphisa iinwele zakho.
Ngeenwele ezinde ngaphezulu, ukusikwa kutsalela ingqalelo kwisitayile endaweni yebunzi lakho. Khetha ukwahlula iinwele zakho ecaleni okanye uye kujonga okungcolileyo kuxhomekeke kukhetho lwakho. Le nwele ikhuthazwe ngumkhosi ilungile kuba yeyamadoda, ifuna ukugcinwa okuncinci kwaye isebenzela uninzi lwabafana.
Mde kwaye yaLayishiwe
Abafazi bathanda amadoda aneenwele ezinde eziluhlaza. Oku kulula kwaye kungasebenzi iinwele ezinde zabafana Ijongeka iyimfashini kwaye inomdla, ngakumbi ukuba ufuna ukuyisebenzisa ukufihla ibunzi lakho. Nokuba uyafuna ubude beenwele eziphakathi okanye isitayile eside, uya kufuna ukuba neenwele ezimfutshane ngaphambili ukuncedisa ubuso bakho.
Sebenzisa udongwe, imousse, okanye ukhilimu kwisitayile kunye nolawulo lweenwele zakho. Ezi mveliso zesitayile ziya kukhulisa ukuthungwa kunye nokuqaqamba ngelixa zinciphisa i-frizz. Ngapha koko, unganxiba iinwele ezinde ezithambileyo kwaye zintle okanye zi-edgy kunye ne-grungy.
I-Choppy Crop ephezulu iphela
Choppy bangs zihamba ngokwendalo nge Ukuphela kwesityalo . Ukucheba iinwele okuphezulu kuqala iinwele ezimfutshane kakhulu macala onke, kwaye igxininiswa ngukufiphala emacaleni nasemva. Esikhundleni sobude obufanayo ngaphambili, i-choppy fringe inokuhambisa i-flair kunye nesitayile esahlukileyo.
Ijijile kwaye ishushu, ii-bangs zamadoda zinokuba ziinwele ezipholileyo zebunzi elikhulu elingatsali ingqalelo kubuso bobuso. Endaweni yokuba abafana baphele bekhupha i- iinwele ezihamba phambili .
Gqamisa iinwele zakho ngenxalenye yeklasi esecaleni. Ifezekile kumadoda akhetha ukucheba iinwele ezicocekileyo, i icala icala lemihla iza idityaniswe nento entle taper , ukubuna okanye undercut emacaleni. Ukuthatha ngokutsha, faka umgca kunye nenxalenye enzima kunye neenwele zobuso.
uDavid Beckham iinwele ezinde
Xa uthambisa, hlula iinwele kwelinye icala. Yishiye iyeyesiko kwaye icabalele, ikhululekile kwaye iphakanyisiwe, kunye / okanye uthathele ingqalelo ukuvumela ezinye iinwele zakho ngaphambili ziwe phezu kwebunzi lakho ukwenza umphetho omfutshane.
Sebenza ngento oyifumeneyo kwaye uhambe ngokufutshane kwaye Imbonakalo emdaka . Iinwele ezimfutshane ziyakhawuleza kwaye zilula. Faka isicelo se-pomade, i-wax okanye udongwe ngokulinganayo kuyo yonke indawo emva koko ucofe iinwele zakho phambili okanye ngasemva nangaphezulu.
Gcina isitayile sikhululekile kwaye sidumbile, uvumele iinwele zakho zihambe kuzo zonke iindlela zendalo. Isitayile esimdaka sinokuphambukisa ingqalelo kubungakanani bebunzi lakho okanye ujijelwe phambili ngokwaneleyo ukugubungela ngokwaneleyo iinwele zakho.
Xa iinwele zakho zinomthamo wendalo kunye nokuthungwa, kubonakala kujongeka kwaye kugcwele. Iinwele ezenziwe ngombala ziyabhengeza kwindalo iphela kodwa zilunge ngakumbi kumadoda aneenwele ezincinci okanye ezicekethekileyo.
Ngethamsanqa, unokukwazi ukubhala ngesandla zonke iifayile ze- iinwele eziphezulu zamadoda . Iimveliso ezifanelekileyo zesitayile sematte ziya kuba nefuthe lokuqina. Nciphisa ubunzulu obongezelelweyo kwisiphelo se-chic.
Isitya esinqunyiweyo, esikwabizwa ngokuba yi-mushroom yokucheba iinwele, ngokuqinisekileyo iyinwele yenkwenkwana encinci ebuye yabuya kubafana. Ilungele abafana abanamabunzi amade okanye abanzi, izitya zokucheba izitya ziyafezekiswa ngokusika iinwele kumgca othe ngqo kunye nobude obunye obujikeleze intloko.
Umahluko wale mihla ungabandakanya amacala afihliweyo kunye nomva, kodwa umphambili neenwele ngaphezulu ziyafana. Ifana ne- a Isityalo saseFrance , oku kukhangeleka okukhaliphileyo, okuya phambili kwefashoni kodwa isitayile asisiwo wonke umntu.
Amadoda anendalo iinwele ezishinyeneyo ijongeka intle ngesinwele esinebrashi. Ngelixa ibrashi ingayifihli ibunzi lakho, iphakamisa ubume bentloko yakho ukulinganisa ubungakanani.
Ngevolumu engaphezulu kunye nokuphakama ngaphezulu, abafana ebunzini elikhulu bajongeka bancinci xa kuthelekiswa. Ngapha koko, istiked okanye ibrashi ebuyiswayo izitayile zikuvumela ukuba ukonwabele awona macala amafutshane amahle, iinwele ezinde eziphezulu. Ukubrasha iinwele zamadoda, qiniseka ukusebenzisa ipomade eyomeleleyo.
iinwele ezimdaka ezimfutshane amadoda
Iinwele zeSpiky Amadoda aqhubekile ukuba nesitayile kunye nokuthandana. Olona hlobo lupholileyo lolo fiky lweenwele luphela emva koko lubhalwe ngesitayile esityebileyo. Zimnkile iintsuku zokusebenzisa ijeli kunye nokuveza entlonzeni. Endaweni yokuba imveliso yesitayile esemgangathweni iya kukunika ukugqibelela okucocekileyo.
Ngokufana nebrashi phezulu, izitayile ze-spiky zisa ivolumu kunye nokuphakama ukongeza ubukhulu. Isiphumo kukuba ibunzi lakho libonakala lincinci kwaye lilinganiselwe ngokuthelekiswa nentloko yakho yonke.
Inkqubo ye- ukuqhuma kuyaphela Olunye uluvo oluhamba phambili lwamadoda amakhulu ebunzi. Ukuba iinwele ezihlikihliweyo okanye ezibrashiweyo azikwenzeli yona, i-bloutout ye-taper haircut inokuba sisimbo sendlela yanamhlanje ngenkangeleko yakho.
Idityanisiwe kwaye ibrashiwe umva, ukuvuthelwa kusebenza ukunciphisa ubungakanani bebunzi lakho kunye neenwele ngokujolisa amehlo kwizinwele zakho zodidi oluhle. Gcina isitayile silula kwaye sicocekile ngepomade okanye udongwe ukuze ubambe indalo.
ukuchetywa kweenwele kumadoda obuso obungqukuva
indlela yokuqonda uphawu lwakho lwenyanga
ukucheba iinwele eziphakamileyo kulusu
itshathi irula wokubala